In the side eningizimu-asempumalanga ye eMoscow phezu River Sura ku iVolga esifundeni welula umuzi elikhangayo Penza. It has a umlando ocebile ukuthi kubonakala izinto emzaneni. Ujwayele Penza kangcono ukuqala ngomgwaqo omkhulu eMoscow. Lokho-ke kunikeza umbono walokho nesimo sesakhiwo esikhulu edolobheni elidala. Uma ucabangela izinto Penza kule emgwaqweni, kufanele sinake ukudlula Inyama, nokwakhiwa kwezindlu elakhiwa ngo-1897. It has eziyisithupha isitini ematendeni amahle akhiwe elinemifanekiso.
Penza ezikhangayo kungabonakala kwepaki at emgwaqweni eMoscow. Kukhona ukukhanya nomculo emthonjeni ayisebenzi kahle cuckoo iwashi. Ngokuvamile, lo mgwaqo zonke izakhiwo esakhiwa ekhulwini le-17, cishe ngasikhathi sinye nge ukubonakala emzini. Ayikho isakhiwo esingaphansi ezithakazelisayo kungabonwa emigwaqweni Belinsky - esimweni lapho kanye kwaku Treasury Chamber abuse sombusi. Eceleni injena endlini ophuzi, okuyinto ukala uqwembe kukhunjulwa kancane Misha Lermontov ubulapha nogogo.
Penza Izinto ezikhanga abantu zihlanganisa uhlu kanye nenombolo ye izakhiwo zenkolo, kukhona zithandwa yizivakashi. On Kirov Street engama zintathu esigodlweni ukuthi ukubukeka kwayo ubophekile ukuba abesifazane amathathu abafuna azihlele abode. Ekuqaleni zazigcinwa izindlu, okuyinto wabanika umpristi isonto uPetru Ivanov Christmas. Futhi nje isikhathi insimu sezindela ukunwetshwa. Umuzi ine eziningi ngezakhiwo zamasonto, phakathi lapho isakhiwo endala yeSonto le isimo, elise Gogol alley.
ezikhangayo ezinjalo Penza ku Chkalov Street. Lona esontweni Virgin oNgcwele, isakhiwo elakhiwa ngo isitayela baraque Russian. Uma uhamba emgwaqweni Vodopiyanov futhi kukhona ungabona ibandla St Mitrofan uMbhishobhi Voronezh. Futhi Zakharov ezinde Cathedral of kweNyuka. isakhiwo sayo lakhiwa isitayela Russian-WaseByzantium. Penza walondoloza futhi kuphela isonto ngokhuni - ibandla St Nicholas, sise Konnozavodskoy emgwaqweni. Kunconywa ukubona mosque Cathedral, esimelela emgwaqeni Bakunin.
Kodwa lokho akuyona yonke izindawo ezithakazelisayo, okuyinto idume Penza. Izikhangibavakashi, izithombe zazo ethulwa lapha - ke nje encane kakhulu uma kuqhathaniswa nalokho ungabona, ebuka idolobha. Phela, ngaphezu izakhiwo yezakhiwo, zisekhona izithombe eziqoshiwe eziningi ezahlukene. Ngakho, kuze kube ezibiyele egqumeni, ungabona lesikhumbuzo ukuze abantu bokuqala abahlala kuyo.
Uma ucabangela izindawo ezithakazelisayo ukuthi zingabantu elidume ezikhangayo Penza dolobha kungenziwa kulekelelwa zonke izinhlobo iminyuziyamu, ngalinye elikwazi ikhanga ngendlela yalo. Akunakwenzeka ukuba ukhumbule igama Belinsky Central Park, okuyinto ehlukile lesikhumbuzo bemvelo. Abathandwayo ukuvakashela Penza art lesifunda igalari, okuyinto iqoqo imisebenzi 17-19 eminyaka. Ekupheleni ungavakashela zoo idolobha noma esekisini.